Duufaanta Siyaasadda Ka Jirta Somalia Oo Saamayn Ku Yeelatay DFS Iyo Inta Badan Maamul-Gobaleedyadda | Hobyo Media Online
Duufaanta Siyaasadda Ka Jirta Somalia Oo Saamayn Ku Yeelatay DFS Iyo Inta Badan Maamul-Gobaleedyadda
Oct 8, 2017 - jawaab
Xaallad aan caadi ahayn iyo Gilgil Siyaasadeed ayaa maalmahan maasheeyey Geeddi-socodkii Shaqo ee DFS iyo Maamullada hoos yimaada, waxaana figta sare gaartay Muran-siyaasadeedka ka dhashay Ismaan-diidka iyo Faragelinta dhinaca Maamulka iyo Hawlaha kale.
Xiisadda Taagan ayuuna Mas’uul kasta ku saleeyaa Aragtidiisa ama Awoodda Xilkiisa, waana Dhaqan marin-habaabin kale keeni kara, haddii aan sida ugu caqligalsan loo xalinin barbar yaaca ka dhex jira DFS iyo Maamul-gobaleedyada.
Mashaqada Siyaasadda ee ay Muwaadiniintu dhabana-hays ka qaadeen ayaa ah Dabeecadaha Jaanta Roganka ee ay Madaxda Maanta min Heer Qaran ilaa Maamul-gobal isku maan diissan yihiin, waana Xaallad Kacsan, inkastoo aysan Madaxdu qabow ama Kulayl ku haynin Khilaafka Taagan.
Xeeldheerayaasha ayaa rumeysan in Khilaafka Siyaasadda Xiligaan taagan loo kala qeybin karo:
1- Khilaafka DFS dhexdeeda, taasi oo badankeeda lagu salaysan karo Jah-wareer ka jira Nidaamka Maareynta Waajibaadka Hay’addaha Labada Gole.
2-Khilaaf DFS iyo Maamul-gobaleedyadda, kaasi oo ku salaysan Damac-siyaasadeed iyo Xarig-jiid ka dhashay Khilaafka Khaliijka.
3- Khilaaf Hoose oo u dhexeeya Maamul-gobaleedyadda oo ku salaysan Khilaaf dhinaca Maamulka iyo Aragtida, waana Buuqa ugu weyn ee haatan ololkiisa laga dareemi karo Maamul-gobaleedyadda Galmudug, K/Galbeed iyo Puntland.
Marka aad loogu kuur-galo Khilaafka DFS iyo Maamul-gobaleedyadda waxaa la dhihi karaa waa mid soo-jireen ah, iyadoo Madaxda Maamul-gobaleedyadda wax caadi ah u arkaan inay farageliyaan Awoodaha DFS loo idmaday.
Faragelintaasi iyo marin-habaabinta kale ayaana u muuqda inay Madaxda Goballadda weli galti ka yihiin Nidaamka Federalka iyo Awoodaha Heerka Qaran iyo kuwa Gobaleedka.
Muranka Siyaasadda ee haatan taagan ayaa ah saamaynta uu inagu yeeshay Khilaafka dalalka Khaliijka iyo Go’aanadda is-narbar yaaca ee ay kala qaateen DFS iyo Maamul-gobaleedyadda.
Hanka Dhaqaalaha laga helay Dowladaha Khaaliijka ayaana sii murjin kara Xiisadda oo haatan dacalo badan yeelatay.
Si kastaba ha ahaatee, Khilaafka Ololkiisa hareeyey Siyaasadda Qraanka ayaa waxaa ku lug leh Dowlado badan oo daaha gadaashiisa wax ka hagayo, balse, waxaa isweydiin mudan ma laga badbaadi doonaa Duufaanta Siyaasadda ka jirta Somalia iyo Loolanka u dhexeeya DFS iyo inta badan Maamul-gobaleedyadda qeybta ka ah Federalka